isitshizi sekhephu Abavelisi kunye nababoneleli - China isitshizi sekhephu Factory
I-250ml yomgangatho ophezulu wetheko lonyaka omtsha i-snowspray yabantwana yomtshato, iKrisimesi, i-carnival
Ukutshiza kwekhephu kubantwana likhephu elenziweyo elinyamalala ngokukhawuleza, lifumaneka kumatheko ekhanivali ukwenza umhlaba omnandi wekhephu.
Uhlobo: Izibonelelo zokuhombisa iKrisimesi, iZibonelelo zePhathi
Uhlobo lwento yeKrisimesi: Ukuhlobisa iKrisimesi
Ileyibhile yabucala ihoseyili yetheko elonwabisayo igwebu Shun Pai isitshizi sekhephu sokuhombisa iKrisimesi
I-Shun Pai party foam snow spray ilungele umtshato, usuku lokuzalwa, iHalloween, ilungiselelo lendawo yoNyaka oMtsha.
Ngaba ubukhulu: 52 * 118mm
Isitshizi sekhephu seJoker sokubhiyozela iKrisimesi
Joker ikhephu spray, phi ipateni yejoker ishicilelwe, iyanyibilika ngokukhawuleza, yenzelwe ngamatheko omthendeleko ophambeneyo, njengeMinyaka emitsha, iKrisimesi eyandulela, ngaphandle kunye neqela langaphakathi kunye nomtshato, njl.
Uhlobo: Ipati Izibonelelo zokuhombisa
Uhlobo lwento yeKrisimesi: Ukuhlobisa kwangaphandle kweKrisimesi
200ml itheko fiesta de Espuma ikhephu isitshizi for Holi carnival umbhiyozo
I-Espuma isitshizi sekhephu, luhlobo lwesitshizi sekhephu elinogwebu, ikwabizwa ngokuba yi-artificial carnaval fiesta de espuma nieve spray, elungele imisitho emikhulu okanye icarnivals.
Uhlobo: Izibonelelo zokuhombisa iKrisimesi
Uhlobo lwento yeKrisimesi: Umhombiso wangaphandle weKrisimesi
Ikhephu laseTaiwan litshiza i-150ml yokuhombisa itheko
Isitshizi sekhephu saseTaiwan, umhombiso wetheko, sisitshizi sekhephu esenziweyo esiba ngumphunga ngokukhawuleza, silungele imibhiyozo ephambeneyo ukudala umoya wekhephu.
Uhlobo : Izibonelelo zokuhombisa iKrisimesi
Indlela Yokuprinta: 4 imibala
Umtshato weholeyili uthanda itheko lokutshizwa kwekhephu elinogwebu elinomgangatho olungileyo
I-Party foam snow spray, enokuthi ingaphezulu igqunywe ngepatheni ye-joker, ihambelana nomoya womthendeleko, ngakumbi ngexesha loSuku lweHalloween.
Uhlobo lwento: Imihombiso yekhephu yangaphandle (iKrisimesi, iHalloween, uNyaka oMtsha…)
Ipati ibonelela ngemihombiso enemibala ephambeneyo i-Bear Snow Spray ngeKrisimesi, i-carnival, umbhiyozo weHalloween
I-snowspray ye-Bear, i-can surface igqunywe ngeepateni ezintle, ihambelana nomoya womthendeleko, ngakumbi ngexesha
Umgangatho ophezulu omkhulu wokutshiza umpu wokutshiza ikhephu lombhiyozo we-carnival
I-Trigger gun Joker isitshizi sekhephu, esinomthamo omkhulu, inokutshiza ikhephu elenziweyo elimhlophe phezulu nangaphezulu kwaye iyathengisa kumazwe amaninzi.
Uhlobo: Ubonelelo loMnyhadala kunye neQela, iZibonelelo zokuhombisa iKrisimesi
Indlela yokuprinta: imibala emhlophe okanye emi-4
Uhlobo lwento yeKrisimesi: Ukuhlobisa kweqela langaphandle
I-250ml yepati ephambeneyo enemibala yekhephu yokutshiza yeHalloween okanye iKrisimesi
Isitshizi sekhephu somlingo likhephu elenziwe lanyamalala ngokukhawuleza, elifumanekayo kwitheko le-carnival ukwenza ikhephu elimangalisayo.
Uhlobo lweKrisimesi yeKrisimesi: uMhlobiso weQela langaphandle
Imveliso eshushu ye-2021 yeKrisimesi ehlekisayo ithanda isitshizi sekhephu sikaSanta somhombiso wepati
Olu hlobo lwesitshizi sekhephu, kunye neepateni zikaSanta Claus kunye nezinye iipateni ezintle, zinokutshiza ikhephu elingeyonyani kwaye zenze indawo entle yekhephu.
Qalisa umpu wekhephu ukutshiza sisitshizi sekhephu esenziweyo ngomthamo omkhulu, ephuphumayo ngokukhawuleza, ilungele amaqela etheko eliphambeneyo ukudala umoya wekhephu.
Uhlobo : Krisimesi Ukuhlobisa Izibonelelo
Doraemon snow spray 250ml wholesale for umbhiyozo chrismas
Doraemon snow spray 250ml wholesale
Doraemon isitshizi sekhephu, ikwabizwa ngokuba yinkohliso isitshizi sekhephu, isitshizi sekhephu sepati, siyanyibilika ngokukhawuleza, yenzelwe ngamatheko omthendeleko ophambeneyo, njengeMinyaka emitsha, iKrisimesi eyandulela, ngaphandle kunye neqela langaphakathi kunye nomtshato, njl.
Umbala we-Boss isitshizi sekhephu sokubhiyozela i-carnival
Umbala we-snow spray, yenziwe ngentsimbi okanye ibhotile ye-tin, iqhosha leplastiki kunye nomlomo ojikelezayo, onemibala eyahlukeneyo. Inokudala ikhephu elihle kwaye ikunike inkohliso yokuhamba kwihlabathi elinemibala yekhephu.
Indlela yokuPrinta: imibala emi-6
Ihoyilesi ebhulowu yeKrisimesi inokutshiza ngekhephu ngexabiso elifanelekileyo
I-Blue can snow spray, kunye neziqulatho ezininzi, inokutshiza ikhephu elimhlophe eliqhelekileyo kwimithi yeKrisimesi kunye neentyatyambo, ezilungele ukuhlobisa ubusika.
Ukuthengiswa okushushu kwetheko logwebu lokutshiza kwekhephu kwimpahla yokuzalwa komtshato
I-Party foam snow spray, kubandakanywa ne-foam ecebileyo, igesi engaphezulu, ikhephu elingaphezulu, linokutshiza ikhephu elimhlophe eliqhelekileyo kwimithi yeKrisimesi kunye nezithsaba, ezilungele ukuhombisa ubusika.
Iivenkile ezikumgangatho ophezulu itheko Russian chei snow ukutshiza ukubhiyozelwa umtshato
I-Chei snow spray, inyibilika ngokukhawuleza, eyenzelwe amaqela etheko eliphambeneyo, njengoNyaka oMtsha, uBusuku bangaphambi kweKrisimesi, ngaphandle kunye nepati yangaphakathi kunye nomtshato, njl.